Halkee marayaa heshiiskii kooxda Liverpool ay ku dooneysay saxiixa Thiago Alcantara?? – Gool FM - Idman news
Halkee marayaa heshiiskii kooxda Liverpool ay ku dooneysay saxiixa Thiago Alcantara?? – Gool FM
(Yurub) 17 Sebt 2020. Warbaahinta Ingariiska ayaa shaacisay daqiiqado ka hor maanta oo Khamiis ah arrin ku saabsan heshiiska ay Liverpool ku dooneyso inay kula saxiixato xiddiga khadka dhexe naadiga Bayern Munich ee Thiago Alcantara.
Saxafiga lagu kalsoon yahay ee James Pearce, isla markaana aad ugu dhow kooxda Liverpool, ayaa xaqiijiyay in kooxda heysata horyaalka Premier League ay si rasmi ah ugu dhaqaaqday saxiixa Thiago Alcantara.
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay ogolaatay inay bixiso 30 million euros oo ah qiimaha ay codsatay kooxda Bayern Munich, ama qiimo ku dhow ee ah 27 million euros, si ay ula saxiixato Thiago Alcantara.
Dhamaan warbaahinta Ingariiska kuwooda loogu kalsooni dhowyahay ayaa shaaciyay warkan soo ifa baxay daqiiqado kahor ee ah inLiverpool ay u dhaqaaqday wadahadal si ay u soo afjarto heshiiska ay Bayern Munich kaga dooneyso Thiago Alcantara, saacadaha soo socda gudahood.
Yeelkeede, James Pearce ayaa sheegay in Liverpool ay kala heshiisay wakiilada Thiago Alcantara dhamaan shuruudaha shaqsiga ah iyo mushaarka ciyaaryahanka.
Previous Barcelona oo ku dhow inay dhameystirto heshiiska xiddig ka tirsan Kooxda Ajax – Gool FM
Next Gareth Bale oo dib ugu soo laabtay Tottenham – Gool FM